Chirongwa cheApple chekushandisa patsva chinowedzera kuApple Watch | Ndinobva mac
Chikamu cheApple chekushandisa patsva pawebhusaiti yeApple yeAmerican chatove neApple Watch yakawedzerwa, chero modhi yeApple smart wachi inogona kutumirwa kuApple kuitira kuti ikwanise kushandisa zvayaigona kubva pachigadzirwa uye kuishandisa zvakare zvakanaka. Apple yave ichidzokorodza zvigadzirwa kwemakore uye vangori vaviri "Liam" robhoti rakawedzerwa kuita basa iri iyo yaitove yakaburitswa muchiratidzo chakakosha.
Hapana mubvunzo nyaya yekudzokorodza zvese zvinobvira zvakakosha Kuvandudza nharaunda nekutarisira nyika, Apple yakanyudzwa mune iri basa kwenguva yakareba uye iri kuzvipira zvakanyanya uye zvakanyanya kuedza. Iye zvino chimwe chigadzirwa chinobatana nerunyorwa rweApple muchikamu chino ndiApple Watch.
Kana yako Mac kana iPad iri mune yakanaka mamiriro, unogona kuchinjana iyo online kana kuApple Chitoro uye Apple ichakubhadhara iwe zvishoma izviKana chishandiso chisingashande kana chisina kukosha, unogona kugara uchichirasa zvine mutsindo nechirongwa ichi cheApple chinotendera kuti zvishandiswezve zveiyo iPad, iPod, Mac, PC, smartphone uye ikozvino muUnited States iyo Apple Watch. Zviripachena kuti mushandisi uyo anowedzera kudzokorora komputa haafanire kubhadhara chero chinhu. Kana isu tiine michina yakawanda yekugadzirisa nekuti ikambani kana chikoro, Apple inoita mutero pazviri pakutenga zvigadzirwa zvemhando nyowani.
Maitiro ekudzoreredza aripo kune zvese zvigadzirwa zvatiri kuda kutora kuzvitoro zvine Apple pasi rese kusanganisira neSpanish, asi Aya makomputa anofanirwa kuoneka pane iyo runyorwa rune Apple chikamu chekudzokorora uye mune iyo iMac, Mac mini, Mac Pro uye desktop PC, izvi zvinofanirwa kugadziriswa zvakafanana kubva ku webhu pamhepo yekambani. Muzviitiko zvese, iyo mari inogamuchirwa yekushandisazve inozobhadharwa naApple sezvavave vachiita kusvika zvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chirongwa cheApple chekudzokorora chinowedzera kuApple Watch
Apple kuti itange kubhadhara Ireland mamirioni aanokwereta pamutero